Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Miyey Duufsatay Dabeyshii Muqdisho? | SAHAN ONLINE
Laba todobaad ka hor ayey ahayd markii mid kamid ah Wasiirada Puntland xilkii laga qaadey kadib markii uu aragtidiisa ka dhiibtey sarkaalkii ONLF ka tirsanaa ee Dowladda Fdereaalka gacanta u gelisey Itoobiya.
Dastuurka Puntland doorka Madaxweyne ku-xigeenka waxa uu ku soo koobay 6 qodob, kuwaas oo u badan in uu yahay la taliyaha Madaxweynaha iyo in uu qabto shaqooyinka Madaxweynuhu u igmadey, dalkana hoggaamin karo marka Madaxweynuhu geeriyoodo.
Waxaa jira warar soo gaaray Horseed Media oo sheegaya in qorshaha dabaysha Galmudug baabi’isay aysan halkaas ku ekaan ee ay u gudbi karto Puntland, halka Somaliland la isku dayayo in la farogeliyo doorashada bisha Nofeembar si qalalaase siyaasadeed looga abuuro.
Xubno sar-sare oo ka tirsan Dowladda federaalka ayaa muddooyinkii danbe xiriir la sameeyey Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiim Cumar Camey, sidoo kale waxay xiriir dhaw la sameeyeen afhayeenka Baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi oo warar Horseed soo gaarey sheegayaan in uu Madaxweyne Farmaajo kala hadley arrinta xiisadda Khaliijka iyo mawqifka Puntland.
Dowladda federaalka ayaa ka hor istaagtey safiirka dalka Imaaraadka Carabta u fadhiya Soomaaliya Maxamed Cusmaan in uu safar ku tago 01 Okt magaalada Bosaso oo ay ka dhici lahayd munaasabadda furiutaanka mashruuca dekadda Bosaso, wararku waxay sheegayaan in Dowladda Federaalku ay safiirka u sheegtey in heshiiska DPWorld ay ka soo horjeedaan shacabka Puntland iyo Xildhibaanada Puntland ee Dowladda Federaalka ku jira ee labada aqal. Maxamed Cusmaan safiirka Imaaraatka ayaa la sheegayaa in uu hadda tegayo dalka Imaaraadka Carabta si uu diyaarad toos ah ugu tago Boosaaso, wararkan Horseed Media si madaxbanaan uma xaqiijin karto.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ee ay ahayd in ay adkeyso Dowladaha xubnaha ka ah, kuwo taagta daran ee curdanka ahna u turto ayaa hadda ciyaareysa siyaasad burburin ku dhisan taas oo la dhihi karo dab ayey ku ciyaareysaa, waxaana ka khaladan taariikhdaa siyaasiyiinta Puntland u yaqaana in ay tahay Kurdistaantii Soomaaliya.
Puntland waxay ku taagan tahay shacab bislaadey 19 sano ku soo caano maaley maamulkooda yar, dhamaan hay’adihii dastuuriga ahaa u dhisan yahay, dhaqaale ahaan aan Dowladda federaalka waxba ka helin oo ay uga maqan tahay Malaayiin Dollaar oo ay ku dhistey asaaskii Dowladda federaalka 2004-2009, haddaba miyey suurta gal ka tahay waxa ka dhacay Galmudug iyo Hirhsballe, si fudud waxaa loo oran karaa siyaasiyiinta dhalinyarada ah ee Dowladda federaalku dharaar cad ayey riyoodeen.
Riyo maalin waxaa jira kuwii qoray warkaan! Danta dadka diinta iyo laku waxay kujirtaa #NabadIyoNolol! Dadkiina dhinac karaaca.
iska hadlow ina igarre xagaad puntland uga dhigtay wax belo ka dhacday hadda puntland iyo dadkeeda waad argtaa waxa boosaaso kula haysta iyo dekeda puntland hogaana malaha siyaasadna malaha waxayna maraysaa halkii madaxda galmudug madhay haddii ay u hogaansami waydo sharciga lagu dhaqayo dalka